Tombontsoa mangosteen | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | Vatsim-pivelomana, sakafo
Mangosteen Izy io koa dia fantatra amin'ny faritra hafa eto an-tany mangosteen. Izy io dia voankazo malaza be any amin'ny kaontinanta Azia, raisina ho mpanjakavavin'ny voankazo noho ny toetra tsiro be sy noho ny fananany maro.
Izy io dia voankazo misy fizarana fotsy ao anatiny ary misy hoditra mafy ety ivelany. Izy io dia azo avy amin'ny hazo tropikaly any Indonezia. Ahitana isan-jaton'ny xanthones, antioxidant tena tsara sy mahery.
Afaka manome fikitika hafa ny salady, salady amin'ny voankazo ary tsindrin-tsakafo isika raha mampiditra ilay mangosteen. Avy eo, ho hitantsika eo izy ireo ny fananany ambony indrindra, inona no tombony azo hanome antsika, izay ahafahantsika mahazo azy sy ny fanoherana azy.
1 Fananana mangosteen
2 Tombontsoa azo avy amin'ny mangosteen, inona no ilana azy?
3 Aiza no hividianana mangosteen
4 Kapsily mangosteen
5 Vokatry ny mangosteen
Izy io dia maniry eo amin'ny toetrandro tropikaly, any Azia atsimo ary amin'ny kaontinanta amerikana. Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny hoe mangosteen na mangosteen sy ny azy anarana siantifika dia garcinia mangosteen.
Izy io dia misy:
Izany dia voankazo antioxidant, ampiasaina amin'ny fitsaboana voajanahary an'arivony taona lasa izay, dia manampy amin'ny fandanjana ny rafi-pitabatabana, ny hozatra ary ny metabolika.
ny xanthones Izy ireo no mahatonga azy io hahasoa azy ireo, izy ireo no fitondra mandoto izay manome izany kalitao izany. Raha mampiditra mangosteen amin'ny sakafontsika isika dia hanampy azy hahazo zavatra betsaka kokoa.
Vitamina vondrona B
Tombontsoa azo avy amin'ny mangosteen, inona no ilana azy?
Ho hitantsika eo ny fampiasana ny mangosteen.
Manamora ny fiasan'ny am-po satria manakana ny lalan-drà tsy hihamafy.
Fitsaboana voajanahary tsara ho an'ny fiakaran'ny tosidra.
Voankazo tena diuretic, ka afaka manampy amin'ny fitsaboana ny aretin-tratra, vato voa, gout, na fitazonana tsiranoka.
Sakano tsy hijaly ny sasany allergy.
Araka ny efa nolazainay dia misy vokany izany antioxidant.
misakana ratsy kolesterola noho ny atin'ny fibra avoakany.
Fitsaboana fanaintainan'ny hozatra sy taolana.
misakana radical maimaimpoana manafika ny hoditra.
Recommended for sakafo mampihena, mifehy ny lanja ary misy vokany mahavoky. Mety amin'ny fanampiana voankazo mba hamoronana malama tsara.
Misaotra ny atiny avo lenta ao vitaminina C manadio ny vatantsika.
Manadio ny rà, noho izany, ny drà ho salama tsara hatrany izany.
Mikarakara ny rafi-pitabatabana afovoany izy io, ka izany no mahatonga azy io ho toy ny voankazo tsy tia Parkinson's sy anti Alzheimer. Antidepressant fananana dia omena azy.
Ampitomboy ny fiarovana ary mitazona viriosy lavitra izy io.
Misy koa io vitamin B12, manatsara be ny rafi-pitabatabana sy ny metabolism ao amin'ny aty.
Aiza no hividianana mangosteen
Ny mangosteen dia tsy voankazo fanta-daza any Espana. Mety ho lafo tokoa ny fahitana azy. Matetika izy ireo dia tsy manana izany any amin'ireo mpivarotra ambongadiny ary kely kokoa amin'ny fivarotana lehibe sy tsenabe.
Angamba ilay mpivarotra voankazo eo amin'ny manodidina anao dia manana mpamatsy eo am-pelatanany izay manompo mangosteen, saingy tsy izany no izy matetika. Afaka mahatsapa an'io sakafo matsiro io dia azonao atao mividy amin'ny tranokala isan-karazany amin'ny Internet, izany noho ny hevitr'ireo mpandraharaha vitsivitsy dia azontsika atao tsara ny mahazo azy io avy any an-trano.
Ny mangosteen dia zara raha fantatra any AndrefanaNa izany aza, ny olona mahita azy dia tsy te hamela azy handositra intsony. Voankazo lafo io noho ireo antony ireo, ny tsy fahazoana azy dia mitombo ny sandany.
Ny kilaon'ny voankazo vaovao dia mitentina manodidina ny 25 euro ary mora simba, mora lany daty. Toa chestnut izany saingy feno nofo ny atiny.
Araka ny efa hitantsika, ny fahazoana an'ity vokatra ity dia mety ho somary mandrara, ny vidiny dia avo dia avo ary ny mahita azy io dia mety ho odyssey. Na izany aza, misy fomba hafa handaniana azy io.
Ny mangosteen dia tena sarobidy ho an'ny xanthones mirakitra izany, ny antioksidanany, dia naneho fa mety ho tena tsara izy ireo tazomy ireo karazana kanseran'ny sasany. Noho izany dia afaka mihinana mora kokoa izy ireo amin'ny kapsily.
Tamin'ny andro taloha dia tsy dia nisy loatra ny fanafody hitazomana ny hoditry ny hoditra sy hikarakarana tsara. Ny mangosteen dia mety hahasoa tokoa amin'ny fikolokoloana ny hodintsika. Ny fanadihadiana natao tamin'ny klinika dia naneho fa manana karazana xanthones 40 izy, izay manome tombony lehibe amin'ny fanasitranana aretina sasany.
Ity manaraka ity dia naseho:
Misoroka ny homamiadan'ny tsinay, manakana ny famoronana sy ny fampandrosoana ny fivontosana.
Misy vokany manakana raboka bakteria.
Mandrisika ny sela phagocytic ary mamono bakteria intracellular.
dia mampihena famokarana holatra.
Vokatry ny mangosteen
Ny sakafo rehetra dia mety misy contraindications, zava-dehibe ny fahalalana kely amin'ny lalina ary bebe kokoa raha sakafo tsy dia fantatra loatra eto amintsika.
Ny fitrandrahana azy dia mifandray amin'ny fikolokoloana ny fivalanana sy ny aretin-koditra. Na izany aza, mila fikarohana bebe kokoa ianao hanohanana ireo tombony rehetra.
Mety hiteraka asidra laktika- Mety hiteraka fisaleboleboana sy fahalemena izany. Raha tsy hita ny asidra dia miangona ao anaty vatana ary mety hampidi-doza.
Mety hifandray amin'ny fanafody sasany toy ny fitsaboana simika, fitsaboana amin'ny alkylatable agents ary antracyclines.
Manoro hevitra izahay satria tena zava-dehibe izany mampandre ny dokotera ao amin'ny fianakaviana ny sakafo tsy fanta-daza izay manomboka laninay. Zava-dehibe ny fanangonana vaovao mba tsy hampatahotra antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Tombony mangosteen
Marta silva dia hoy izy:
Fahafinaretana tokoa ny manana ireo sakafo TANNNNNN mahasalama sy manan-danja amin'ny fiainana salama
Valiny tamin'i Martha Silva
laura valenzuela dia hoy izy:
Inona avy ireo tombontsoa lehibe ary hitako nandalo 40 taona izy ireo?
Valiny ho an'i Laura valenzuela
Hevitra telo hanararaotana ny vary sisa